Fanimbazimbana ny valanaretina
Ny uterus, na ny rongony trompetra, dia rongony matevina izay mivelatra avy amin'ny ovaire tsirairay amin'ny tranonjaza. Ao anatiny izy ireo dia misedra epithelium sy cilia, izay mahatonga ny fihenan'ny rambony, ary ny ovy dia alefa avy amin'ny ovatra ho an'ny tranonjaza. Ao amin'ny tavoahangy ihany koa dia namorona tontolo tsara ho an'ny fihetsiketsehana sira amin'ny atody. Raha misy ny fampangatsiahana dia ny ziogôty dia ho ao amin'ny tranonjaza. Na izany aza, indraindray mety misy ny tsy fanarahan-dàlana amin'ny fampiasana ny valanaretina trompetra. Ny fahavoazana amin'ny selan'ny epithelium na ny cilia dia mitarika amin'ny adhesions, ary ny spermatozoa dia tsy afaka manatona ny ovule na ny tsiranoka atody ao amin'ny tavoahangy. Izany rehetra izany dia mampihena ny fahafahan'ireo bevohoka raha mihen-danja ny ratra, na ny fitondrana vohoka dia ho eopatika.
Ny antony mahatonga ny fanakanana ny fantsona
Ny fanelingelenana ny fantsona dia mety ho ampahany na feno. Misy antony maromaro amin'ity fanitsakitsahana ity:
Ny aretina azo avy amin'ny firaisana, matetika ny gonorrhea sy ny klamido, indrindra fa tsy sitrana ela.
Ny endometriozy koa matetika dia miteraka ny fanesorana ny tandroka trompetra. Izany dia mitranga rehefa manomboka mitombo mihoatra ny fetrany ny plastika anatiny ao amin'ny tranokala, manitatra ao amin'ny ratra. Noho izany dia misy fonosana anatiny.
Ny fitsaboana amin'ny taova matevina koa dia miteraka adhesion amin'ny valan-dronono.
Fihetseham-po taorian'ny fanalan-jaza, fampiasana spiral intrauterine.
Toby fanesorana: soritr'aretina
Matetika ny vehivavy dia tsy mahafantatra momba ny aretina. Tsy misy marika manakana ny fanesorana ireo tavoahangy tsy voamarina noho ny antony mahatonga ny vehivavy matetika marary antibiotika matanjaka. Noho izany, mitohy miafina ny fizotran'ny taova ao amin'ny taolam-paty. Ny aretina maharitra, endometriozy, amin'ny farany, ary mahatonga adhesions. Na dia izany aza, ny fanontaniana mipoitra, ahoana no hamaritra ny fanesorana ny fantsona, raha malemy ny soritr'aretina? Amin'ny ankapobeny, azo atao ny mamantatra io aretina io amin'ny fotoana iray anaovan'ny vehivavy iray vohoka mandritra ny fotoana maharitra. Ny dokotera mpitsabo dia mamaritra fitsapana, anisan'izany ny fitsapana ny fifehezana ny valanaretina. Ny fomba fiasa lehibe indrindra dia ny hysterosalpingography (GGS) sy ny sonogasterosalpingoscopy (GSSS). Amin'ireo tranga roa ireo dia misy tsiranoka manokana entina ao anaty tranonjaza, izay miditra amin'ny tandroka trompetra. Miaraka amin'ny GHA, dia misy rantsana iray, miaraka amin'ny SSSS - ultrasound. Ny vatany salama dia mibaribary tanteraka.
Ahoana no hanasarahana ny fanesorana ny fantsona?
Indrisy, ny fanakanana tanteraka ny fantsona sy ny fitondrana vohoka dia tsy mifanaraka. Amin'ity tranga ity dia ny IVF ihany no hanampy. Raha ao anaty fantsom-pandam-barotra anatiny, izay nipoitra noho ny firaisana ny sary amin'ny epithelium, dia omena fandroana ny vehivavy. Io fomba fanao io dia mitovy amin'ny GHA sy SGSG, raha ny tsindry fotsiny no mampiditra ny vatana amin'ny novocaine amin'ny fanadiovana.
Raha toa ka misy ny adhesion ivelany dia tompon'andraikitra amin'ny fanelingelenana ny tavoahangy, azo atao amin'ny fitsaboana ny fitsaboana. Eto ambany ny kibony, misy pika iray natao, ka nokapaina ary nesorina tamin'ny fitaovana manokana. Noho izany dia mivadika sy mivadika ny pipes.
Fanimbana tavoahangy: fitsaboana amin'ny fitsaboana amin'ny vahoaka
Na izany aza, tsy ny vehivavy rehetra no manapa-kevitra amin'ny fidirana amin'ny fitsaboana ary manandrana ny fitiliana fitiliana. Ho an'ireo mpanjifan-java-malaza malaza amin'ny fanelingelenana ny fantson-drano dia ilay mpanjakavavy hogy. Ity zavamaniry ity dia ampiasaina amin'ny endriky ny tavoahangin'ny rano na toaka. Ity farany dia voaomana toy izao manaraka izao: 5 lany ny voankazo misy ny zavamaniry feno vodka 0.5 litatra. Tsy maintsy mikiry ao anaty toerana maizina mandritra ny 15 andro ilay fitambaran-kitapoka, mihorakoraka indraindray. Ny fampidirana am-patana dia raisina ao anatin'ny 40 isa isan-andro isan'andro mandritra ny ora alohan'ny sakafo.
Hanomana ny ravina, mila 2 teatran-tsetroka boribory boribory ianao mba handefasana rano misotro rano ary hamohana mandritra ny 10 minitra. Avy eo dia napetraka ao anatin'ny thermos mandritra ny antsasak'adiny ny ro. Ity fanafody ity dia naka antsasaky ny kaopy isan'andro in-4 isan'andro isan'andro alohan'ny sakafo.
Noho izany dia miteraka andraikitra goavana ny tobim-pitrandrahana faobe amin'ny mety ho bevohoka, koa ny firaisana ara-drariny dia tokony horaisina tsara eo amin'ny fahasalaman'ny vehivavy.
Rà avy amin'ny vava
Myoma avy amin'ny tranonjaza - ny haben'ny fandidiana sy ny karazana fitsaboana amin'ny fitsaboana ny fivontosana
Ahoana no hanasitranana ny cyst ovar tsy misy fandidiana?
Dresses amin'ny fahavaratra
Fangalarana amin'ny ankizy
Firaisana mandritra ny fitomboan'ny zaza
Kitapo Japoney ho an'ny zaza vao teraka
Furunculosis - ny antony sy ny fitsaboana ny aretina amin'ny alalan'ny fitaovana tsara kokoa
Brazier vita amin'ny vato
Alika lehibe - ny anaran'ny zana-trondro
Fanamboarana akanjo hoditra
Ny kitapo Baldini - fanangonana 2015
Tantara mahavariana 25 momba ny moka izay tsy fantatrao
Ny asa tanana avy amin'ny kofehy sy ny lakaoly
Bibikely potato ao an-trano
Hairianina misy tsipìka lava amin'ny volo midadasika